सर्बाधिक धनराशीको डीपीएल दोश्रो संस्करण घोषणा, रुस्लान क्रिकेट मुख्य प्रायोजक – WicketNepal
सर्बाधिक धनराशीको डीपीएल दोश्रो संस्करण घोषणा, रुस्लान क्रिकेट मुख्य प्रायोजक
WicketNepal Staff, २०७४ आश्विन २२, आईतवार ००:००
विकेटनेपाल, २२ असोज
धनगढी प्रिमियर लिग ( डिपीएल ) को दोश्रो संस्करणको आइतबार घोषणा भएको छ । माघ ५ गते देखि संचालन हुने प्रतियोगितालाई रुस्लान क्रिकेटले मुख्य प्रायोजन गर्नेछ ।
राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमाझ जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज अन्तर्गत विजय डिस्टिलरीको रुस्लान क्रिकेट र आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि धनगढी प्रिमियर लिगको नामको अघि रुस्लान जोडिएको छ ।
सम्झौता अनुसार रुस्लानले आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीलाई ३५ लाख नगद प्रदान गर्नेछ भने ३५ लाख रुपैयाँ प्रतियोगिता प्रबर्द्धन तथा अन्य गतिविधिमा खर्च गर्नेछ । सम्झौता पत्रमा एकेडेमीका अध्यक्ष सुबास शाही र रुस्लानको तर्फबाट जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिका अध्यक्ष श्रीहर्ष शमसेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतियोगिताको यस अघिको संस्करणलाई सगरमाथा सिमेन्टले मुख्य प्रायोजन गरेको थियो ।
डीपीएल दोश्रो संस्करणको बिजेता टिमले २५ लाख रुपियाँ पाउनेछ भने उपविजेताले रु. १० लाख तथा तेश्रो हुने टिमले ३ तथा चौथो हुने टिमले २ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। डिपीएलको पुरस्कार राशि नेपाली घरेलु क्रिकेटमै सर्बाधिक हो । एभरेस्ट प्रिमियर लिगको बिजेताले २१ लाख रुपैयाँ पाउने घोषणा गरिएको छ ।
डिपीएलको गत संस्करणको बिजेताले १५ लाख रुपैयाँ पाएको थियो ।
प्रतियोगिताको प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले रु १० हजार रुपियाँ पाउनेछ भने म्यान अफ द सिरिजले अपाचे १८० सिसिको मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ । यस्तै उत्कृस्ट ब्याट्सम्यान/बलर विधामा समेत पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । पुरस्कारमा मात्रै आयोजकले ५० लाख रुपैयाँ खर्चनेछ ।
प्रतियोगिताको अनुमानित लागत ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
८ वटा टिम
पछिल्लो बर्ष ६ वटा टिमले डीपीएल खेलेका थिए भने यो बर्ष टिमको संख्या बढाएर ८ पुर्याउने आयोजकले बताएको छ । पहिले खेलेका ६ टिमलाई प्राथमिकता दिंदै थपिने २ टिमको घोषणा मंसिरमा गरिनेछ ।
अघिल्लो सिजनमा टिम चौराहा धनगढी, सीवाईसी अत्तरिया, रुपन्देही च्यालेन्जर्स, कंचनपुर आइकोनिक, काठमाडौँ गोल्डेन्स र बिराटनगर किंग्स सहभागी थिए ।
पुर्ब रास्ट्रिय क्रिकेटरलाई सम्मान
नेपालको लागि रास्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको १ जना पुर्व खेलाडीलाई धनगढी क्रिकेट सम्मान तथा नेपाली क्रिकेटमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका १ ब्यक्तिलाई अर्जुन खड्का स्मृति सम्मान स्वरूप १/१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।
धनगढी क्रिकेट एकेडेमी निर्देशक सुबास शाही
दर्शकहरुले डीपीएलको लिग चरणको खेल हेर्न रु. ५० , प्ले अफमा रु. ७० तथा फाइनलमा रु. १००को टिकट काट्नुपर्नेछ । टिकट मार्फत उठेको रकमको २० प्रतिशत फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण अभियान ( ड्रिम फाप्ला ) लाई छुट्याइने छ । यस्तै सहभागी टिमहरुलाई ४० प्रतिशत रकम बाँडिनेछ ।
अक्सनमा आधारित प्रतियोगिता
डिपीएल दोश्रो सिजन पनि अक्सनमा आधारित हुनेछ । प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरुले आफ्नो नाम धनगढी क्रिकेट एकेडेमीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । नाम दर्ता भएका खेलाडीहरुलाई अक्सनमा समाबेश गरिनेछ । नाम दर्ता गर्ने मिति सार्वजनिक गरिएको छैन ।